समाचार - शेन्ज़ेन गुआनशुन टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड
LCD टच स्क्रीनको आधारभूत संरचना र सिद्धान्त के हो?
मेरो देशको सूचनाको विकासको बढ्दो गतिको साथ, जानकारी प्राप्त गर्नका लागि मिडिया अधिक र अधिक प्रशस्त हुँदै गइरहेको छ, ती मध्ये धेरै मल्टिमेडिया मार्फत छन्, र एलसीडी टच स्क्रिनको प्रयोग पनि बढ्दो छ, किनकि टच स्क्रिनहरू मात्र उपयुक्त छैनन्। चीनको मल्टिमेडिया जानकारी क्वेरीको राष्ट्रिय अवस्था, तर साथै टच स्क्रिनको धेरै फाइदाहरू छन्, जस्तै स्टर्डेनेस र टिकाउपन, द्रुत प्रतिक्रिया, अन्तरिक्ष बचत, र सजिलो संचार।
Q:तपाईंको कारखानामा कति उत्पादन लाइनहरू?
A:हाल production उत्पादन लाइनहरु
Q:तपाईंको वितरण समय कति हो?
A:-10-१० दिन पठाउन सकिन्छ
Q:तपाईं एक ट्रेडिंग कम्पनी वा निर्माता हुनुहुन्छ?
A:हामी एक सीधा उत्पादन निर्माता कारखाना हो
Q:तपाईको MOQ के हो?
A:सानो अर्डरहरू स्वीकार्य छन्